I-Golfer Art Wall: I-Biography kunye neNkcazo yeMisebenzi
I-Wall Wall yayiyinkokeli yamaMasters ngasekupheleni kweminyaka ye-1950, kwaye emva koko, ngasekupheleni kweminyaka yee-1970, yayinendima kwimeko eyencedisa ukuqalisa iNtambo yeeMidlalo.
Umhla wokuzalwa: uNksz 25 1923
Indawo yokuzalwa: Honesdale, Pa.
Umhla wokufa: Oktobha 31, 2001
1953 I-Fort Wayne Vula
Ngowe-1954 Umqhubi weeMidlalo
1956 I-Fort Wayne Vula
1957 Pensacola Vula
1958 I-Rubber City Open
1958 I-Eastern Open
Ngo-1959 iBing Crosby National Pro-Am
1960 eCanada evuliwe
1964 I-San Diego Open
1966 ISixeko seNtshumo
Ngowe-1975 iMilwaukee enkulu
• Umdlali wePGA wonyaka, ngo-1959
• I-Vardon Troph winner, ngo-1959
• Inkokheli ye-PGA ye-Tour, 1959
• Ilungu, iqela le-US Ryder Cup, ngo-1957, 1959, ngo-1961
• I-Wall Wall ichazwa ngokwenza izimbobo ezingama-45 ebomini bakhe, isibalo esiyiminyaka emininzi saqatshelwa njengerekhodi yehlabathi (i-Wall totally has been exceeded ).
I-Wall Wall Imbali:
Udonga lwezobugcisa luyaziwayo ngezinto ezintathu: Wayengumkhosi weMasters ; Wayengumrekhodi omkhulu weemigodi-enye; kwaye wathatha inxaxheba kumcimbi owawunceda ukuseka iPick Senior PGA Tour (ngoku kuthiwa yi-Tour Tour).
Udonga lwazalelwa eHonesdale, ePa., Indawo apho ahlala khona eninzi kwaye ehlala kwi-9-hole engama- kamasipala kamasipala engama-9.
Iprofayili yoLonga ehamba kwiphephandaba lasePocono Record yathi u-Art nomntakwabo uDewe babengabagadi begalufu, kwaye abahlali baseHonesdale babecinga uDeye umdlali ongcono.
Ubugcisa, nangona kunjalo, nguyena owayesebenza nzima kunabo bonke.
Ubugcisa kunye noDewe bobabini bakhonza kwiMfazwe Yehlabathi II, kodwa uDewe akazange abuyele ekhaya. Ubugcisa basinda kwimfazwe, kwaye emva kokubuya ekhaya behamba kwiikholeji kwiYunivesithi yaseDuke. Wayeyinkwenkwezi yegalufa yeenkwenkwezi ezimbini zeenkwenkwezi ngelixa eDuke, kwaye wayinqoba i-Championship Amateur yase-Pennsylvania yase-1948.
Wayeneminyaka engama-26 ubudala xa waphumelela kwiDuke ngo-1949.
Udonga lwajikeleza ngaloo nyaka, lwajoyina i- PGA Tour ngomnyaka olandelayo, kwaye yawubamba umcimbi wakhe wokuqala wokutyelela ngo-1953. Wayengumdlali okhuphiswano olunamandla kunye nomdlali wesinyithi onamandla, kodwa udumo lwakhe olugqwesileyo lwaluphumelele xa iWall ithatha iMasters ka-1959 . Wenza ngendlela yesitayela, kwakhona, ukuvala nge-66 kunye ne-birdies kwiintlanu ezisixhenxe zokugqibela ukufumana uCary Middlecoff.
IWonga yaphumelela ezinye iindibano ezintathu ngo-1959, yafumana isihloko somnxeba kunye nesihloko somxholo, waza wabizwa ngokuba nguMdlali wonyaka.
I-Wall yazuza amanqaku amaninzi endleleni, kwaye yaqhubeka idlala iPGA Tour kakuhle kuma-1970. Ukuphumelela kwakhe kokugqibela kokutyelela kwaba ngu-1975 Omkhulu iMilwaukee Open. Washaya uGary McCord ngesifo. Phantse iminyaka engama-52 ubudala, iWall isebenza njengebholethi ye sibini edala ukuba iphumelele kwi-PGA Tour.
Ngo-1978 Wall yaphumelela i-US National Senior Open (ayifani efanayo ne- US Senior Open ).
Kwaye ngo-1979 I-Wall yayibambisana noTommy Bolt kwintlalontle yabantu abadala ababizwa ngokuba yiNkululeko yokuThumela iMigangatho yeGalulo. IWall kunye neBolt bahlaselwa ngoJulius Boros noRoberto De Vicenzo ababehamba ngemingxuma emithandathu ngaphambi kokuba uBoros noDe Vicenzo baphumelele.
Iimvumi zethelevishini zazinzileyo kangangokuba umphathi wePGA Tour uDeane Beman wabuya emva kokudalwa kweMatriki ePGA Tour, nto esiyaziyo ngoku njengeTyelelo leMidlalo.
Ngomnyaka ozayo, iWall neBolt yanqoba le midlalo.
Udonga oludlulileyo kwiminyaka yokuqala yoTyelelo lweMatriki, kwaye lube luhlanu kwisihlomelo semali ngo-1981.
Udonga lwafa ngonyaka ka-2001 waza wangcwatshwa eHonesdale, Pa. I-athimba ye- Pocono Record ibonisa ukuba ukufa kwakhe kwakuyiminyaka engama-52 ukuya emini emva kokuba ephendule.
Kwiindleko eziPhuculo lweSikole esiPhumelekileyo, Yiya kwi-Ofisi yeNqununu
Iilwimi zaseprayimari ngesiNgesi